Kubatana 7.6, iyo yekutanga desktop yekuvandudza kubva 1 ikozvino inogona kuedzwa | Linux Addicts
Kubatana 7.6, yekutanga desktop yekuvandudza kubva 2016 ikozvino inogona kuedzwa
pablinux | 01/05/2022 12:54 | Desks
Chokwadi ndechokuti inowanikwa kubva muna Kubvumbi 21, umo Ubuntu 22.04 uye ese epamutemo maflavour akasvikawo, asi mugadziri wechidiki, Rudra Saraswat, akange asina kubudisa chero chinhu pasocial network kusvika maawa mashoma apfuura. Canonical yakatanga kuvandudzwa kweUnity kuishandisa zvese padesktop uye panharembozha, asi hazvina kuitika sezvaitarisirwa, yakadzokera kuGNOME uye yakatosiya Ubuntu Kubata mumaoko eUBports. Mumwe wechiduku wokuIndia, Rudra Saraswat, akasarudza kumutsa izvozvo kuvengwa nevakawanda vhezheni yeUbuntu, uye ichangobva kuburitswa Kubatana 7.6 beta.
Ubuntu Kubatana 22.04 haina kusanganisira Unity 7.6, asi Saraswat anodaro Ichasvika munguva pfupi. Kune avo vanoda kuzviyedza izvozvi, unogona kuzviita kubva kuJammy Jellyfish, chero iwe uchidhonza terminal, wedzera repository nemakiyi. Kunyangwe isu tichizonyora pano zvese zvinodiwa, kana tikafunga kuti ichasvika nekukurumidza kana gare gare, ini ndinongokurudzira kune avo vanoda kuedza Unity 7.6, asi kwete pamakomputa ekugadzira.
Chii Chitsva muKubatana 7.6
Dash (application launcher) uye HUD dzakagadziridzwa kuti dzivape chitarisiko chazvino uye chinoyevedza.
Yakagadziriswa ruzivo rweapp uye zviyero mune dash preview.
Yakagadziriswa "Empty Trash" bhatani mudoko (ikozvino rinoshandisa Nemo pachinzvimbo cheNautilus).
Akatamisa iyo yese Unity7 shell source code kuGitLab uye akaita kuti iunganidze pa22.04.
Iyo dhizaini yakanyanya kupfava asi inochengeta blur yehurongwa hwese.
Dock menyu uye matipi ekushandisa ane chitarisiko chazvino.
Yakaderera graphics modhi inoshanda zvirinani izvozvi uye dash inokurumidza kupfuura nakare kose.
Kushandiswa kweRAM muUnity7 kwakadzikira zvishoma ikozvino, nepo RAM kushandiswa kwadzikira zvakanyanya kusvika ku700-800 MBs muUbuntu Unity 22.04.
Yakagadziriswa yakazvimirira yekuyedza Unity7 yekutanga (izvi zvichabatsira Unity7 vabatsiri).
Kukanganisa kutarisa kwakavharwa uye nguva yekuvaka ipfupi kwazvo (izvi zvichabatsira Unity7 vanopa).
Saraswat anotsanangura kuti:
Kubatana 7.6 ichave yekutanga kuburitswa kukuru kweKubatana mumakore matanhatu (kuburitswa kwekupedzisira kwaive May 6). Isu takatangazve budiriro inoshanda yeUnity2016 uye tichaburitsa mavhezheni matsva ane mamwe maficha nguva nenguva. Unogona kuiedza nekumhanyisa inotevera mirairo paUbuntu Unity 7 (isu tichaiburitsa kune varipo Ubuntu Unity 22.04 vashandisi, kana ukasawedzera bvunzo PPA):
sudo wget https://repo.unityx.org/unityx.key sudo apt-kiyi wedzera unityx.key echo 'deb https://repo.unityx.org/main testing main' | sudo tee /etc/apt/source.list.d/unity-x.list sudo apt-get update && sudo apt-get install -y kubatana
Ubuntu 7.6 beta yakaziviswa muna Kubvumbi 21, uye Ubuntu Unity 22.04 yakasvika neUnity 7.5.1. Iyo itsva vhezheni yedesktop haisati yavapo, asi Saraswat akavimbisa kuti ichasvika munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Kubatana 7.6, yekutanga desktop yekuvandudza kubva 2016 ikozvino inogona kuedzwa
Ndanga ndichishandisa Wayland paKDE kwemwedzi wose uye... inoda kuvandudzwa
KaOS 2022.4 inosvika neKDE Gear 22.04 uye Linux 5.17.5 sezvitsva zvakatanhamara.